Keydso Lacag Iyo Walwal! Sida Loogu Habeeyo Bacaha Kaabsoosha Kaabsulka Ugu Habboon?
Waa maxay “bacda la isku qurxiyo ee kaabsulka”? Waxay la mid tahay “wardrobe kaabsulka” oo qof walba inta badan waco. In kasta oo aysan ku jirin boorsadan qurxinta alaab aad u badan, haddana waxaa ku jira "waxyaabaha aasaasiga ah" ee lagama maarmaanka u ah qurxinta maalinlaha ah. Iyo alaabta ...
Tan iyo bilowgii xagaaga, madax xanuunka ugu weyn ee carwooyinka aniga oo kale ah oo aan marnaba joojin raadinta quruxda ayaa iska siibaysa qurxinta xagaaga, gaar ahaan marka qurxinta ay kulushahay oo ay qurxintu dhalaalayso. Nus saac ka dib qurxinta halista ah, waxay isu beddeshaa weji rinji weyn leh ...
Ka duwan dareenka "culus" ee dayrta iyo jiilaalka, xagaaga ayaa ku dhawaad ​​"nasasho leh" in la iska qaado, iyo qurxinta sidoo kale waa isbeddel iftiin iyo hufnaan. Laakiin si kasta oo ay daahfurnaantu u tahay daahfurnaanta, adeegsiga lipstick -ka ayaa weli ah tallaabo aan laga maarmin dad badan. ...
Samee 4 Hababka Isu -qurxinta Indhaha, Midabka Indhaha Kaliya ayaa ku Filan!
Waxaan aaminsanahay in quruxda badani ay leedahay dhibaato noocan oo kale ah. Hoosyo badan oo midabyo badan leh ayaa yaab leh marka hore. Ka dib markii ay si indho la'aan ah u dalbadeen amar, waxay ogaadeen inaysan haysan waddo ay ku bilaabaan. Ugu dambayntii, masiirkooda waxaa lagu soo koobi karaa oo kaliya in dambaska si qoto dheer looga soo qaato khaanadda ....
Sida loo codsado qurxiyo, ku fududee 5 tallaabo
Tallaabada 1: Moisturizer Dalbashada qurxinta waa farshaxan. Maqaar jilicsan oo jilicsan ayaa ah maaddadaada ugu fiican. Si aad tan u gaarto waxaad u baahan tahay qoyaan. Wajigaaga dhaq kadibna si deeqsinimo leh u mari, maqaarkaaga sii dhowr daqiiqo si aad u nuugto kareemka ama buufinta. Tallaabada 2: Primer Primer wuxuu kaa caawinayaa u diyaarinta maqaarkaaga concea ...
Sida loo doorto baalasha beenta ah ee saxda ah ee qaabka ishaada?
Dad badan ayaa ku wareersan sida loo ogaado qaababka isha ee u gaarka ah iyo sida loo doorto baalasha beenta ah ee saxda ah. Hoos waxaa ah hordhaca faahfaahsan iyo talooyinka tixraacaaga. Kalocils Beauty ayaa had iyo jeer ku siisa jeedallada beenta ah ee ugu fiican. ...
Sida loo habeeyo astaantaada gaarka ah, habka is -habeynta xirfadeed waxay badbaadineysaa waqtigaaga iyo dadaalkaaga.
Sida loo habeeyo astaantaada gaarka ah, habka is -habeynta xirfadeed waxay badbaadineysaa waqtigaaga iyo dadaalkaaga. 1, U dir faylka astaanta Si aad u sameysato astaanta, fadlan u dir faylasha isha astaanta qaab AI ama qaab PDF ah. Faylka astaanta cad ayaa naga caawin kara inaan si fiican u soo bandhigno saamaynta daabacaadda astaanta marka la daabacayo. Waxaan ...
Sida Loo Codsado Indho -Beel Been, Sida Ugu Fudud Ee Indhahaagu U Iftiimaan Oo U Soojiidanayaan
Sida loo marsado indhashareerka beenta ah, habka ugu fudud ee indhahaaga looga dhigi karo mid dhalaalaysa oo soo jiidasho leh 1, U diyaargarow inaad xirto indhashareer been ah. Ku hay suunka karbaashka ishaada si aad u hubiso dhererka saxda ah in uusan aad u dheerayn, taas oo noqon doonta wax aan dhib lahayn ...
Heerka kobaca ee iibinta tafaariiqda alaabada la isku qurxiyo bishii Oktoobar wuxuu ahaa saddex jeer marka la barbardhigo isla muddadii sanadkii hore, wadar ahaan 28.1 bilyan oo Yuan, oo ah koror 18.3% sannadkiiba
Bishii Nofeembar 16, Xafiiska Qaranka ee Tirakoobka ayaa sii daayay xog muujineysa in bishii Oktoobar, wadarta iibka tafaariiqda alaabada macmiilleyda ee waddankeygu ay ahayd 3,857.6 bilyan yuan, koror sannad-sannadeed ah oo ahaa 4.3%, iyo heerka koritaanku wuxuu ahaa boqolkiiba 1.0 dhibic ka sarreeya bishii hore. Waxaa ka mid ah, t ...
Tayada wax soo saarka qurxinta sare waxay ka timaaddaa cilmi -baaris joogto ah iyo horumarin iyo kormeerid iyo maamulid tayo leh. Nanchang Weiti Technology Co., Ltd. waa shirkad la isku qurxiyo oo kala duwan oo isku dhafan horumarinta wax soo saarka, wax soo saarka iyo iibinta onlaynka ah. U hoggaansanaanta mabaadi’da shirkadda ee “Q ...
Indhashareerka beenta ah ee timaha xoolaha iyo timaha macmalka ah, keebaa kuu roon?
1, Timaha Xayawaanka Timaha xoolaha waxaa laga sameeyaa indhashareer been ah timaha laga soo saaray xoolaha. Marka la barbardhigo indhashareerka fiilada, way ka sii qas badan tahay, laakiin maadaama ay tahay timo laga soo saaray xayawaanka, waxay aad ugu eg tahay timaha jidhka aadanaha, oo leh saliid yar. Waxay leedahay dareen dhalaalaya. Timaha xoolaha kala duwan ...
Kordhinta Indhaha, Jeexa indhaha, indho -dejiye, jeedal mink, dibinta, Iibiyeyaasha Indhaha,